Pataloha / akanjo fohy → Akanjo fanaovana doka • amboradara solosaina P&M matihanina
Pataloha / Shorts - maodely isaky ny vanim-potoana
Pataloha / kilaoty fampiroboroboana izy ireo dia tokony ho manintona amin'ny fahitana sy ny fomba fiasa. Ny fitafiana ahazoana aina ampiasaina dia singa lehibe iray ao ambadiky ny safidin'ny vokatra iray omena. Models pataloha sy pataloha fohy ananantsika any am-pivarotana dia vita amin'ny fitaovana avo lenta izay mamela ny hoditra hiaina sy hifanaraka amin'ny mpampiasa.
Ny pataloha dia mateza ary mahatohitra fahasimbana. Ho an'ireo izay te hisongadina amin'ny fifaninanana na pataloha manokana amporisihinay ny fanatanterahana izany firavaka. Ny fanontana dia natao amin'ny toerana voatondro, miankina amin'ny safidin'ny mpanjifa.
Pataloha Adler miaraka amin'ny mety misy logo, amboradara
Ny haavon'ny avo indrindra
Ao amin'ny fivarotanay dia azonao atao ny mividy pataloha lehilahy, vehivavy na ankizy, ary koa pataloha fohy ho an'ny lehilahy sy ny ankizy amin'ny habe maro. Ny pataloha fohy dia tena malaza amin'ny lohataona sy fahavaratra, raha ekipa sy ekipa maro no manao hetsika ivelan'ny trano. Ho setrin'izany, amin'ny fararano, amin'ny fiandohan'ny taom-pianarana, manomboka ny vanim-potoana hividianana shorts ho an'ny ankizy. Izy ireo koa dia azo antsoina hoe mariky ny sekoly na klioban'ny tsirairay.
Manome marika tsirairay izahay amin'ny fanontana efijery na amboradara amin'ny solosaina. Manao haingon-trano amin'ny fikolokoloana lehibe indrindra izahay, izay azo atao noho ny milina maoderina. Noho ny fanaraha-maso ny amboradara isaky ny dingana dia toa mahomby sy matihanina ilay akanjo. Ny pirinty maharitra dia mahatohitra ny fitaoman-dratsy ataon'ny singa. Ny pataloha sy ny short dia mitazona ny lokon'ny mpanamboatra ary koa ny endrika tany am-boalohany. Ny lamba dia azo sasana matetika, mifanaraka amin'ny tolo-kevitra amin'ny marika - amin'ny fanarahana azy ireo, azontsika antoka fa hampihena ny loza mety hitranga.
Fohy fohy an'ny lehilahy / ankizy Adler, ny mety hisian'ny sary famantarana rehetra, marika
Inoana fa famonoana ho faty akanjo fanaovana dokam-barotra lafo io. Na izany aza tsy marina izany. Noho ny fivarotana fitafiana ambongadiny dia nahavita nahatratra ny vidin'ny famokarana izahay. Amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasa sy andrim-panjakana marobe, ary koa traikefa lehibe, afaka manome fiaraha-miasa azo antoka sy vidiny mifaninana izahay.
Ankoatr'izay, ny mpanjifa izay manao fifandraisana maharitra miaraka aminay fiaraha-miasa, azo omena fepetra isam-batan'olona, ​​ary hiteraka fitsitsiana teti-bola izany. Ny personalization ny pataloha sy ny short dia sarany tsirairay, miankina amin'ny fahasarotan'ireo sary sy ny fomba fanamarihana.
pataloha bershkaPataloha fotsypataloha kintana lehibepataloha bonprix misy pirintypataloha cropphm patalohapataloha mohitopataloha orsaypataloha voatokanapataloha sinsaypatalohapataloha adidasPataloha adidas vehivavyPataloha adidas lehilahymilisy patalohapataloha entam-behivavypataloha entan'ny lehilahypataloha entanapataloha fiterahanapataloha sigaraspodnie damskiepataloha vehivavy misy pirintySweatpantsadidas joggerspataloha vehivavypataloha vehivavy misy pirintypataloha lehilahypataloha lehilahy misy pirintyakanjo lava nikepataloha misy pirintypataloha lehilahy misy pirintypataloha misy pirinty eo ambanypataloha misy pirinty any aorianapataloha misy ny pirintinao manokanaPataloha Jeans misy pirintypataloha jeanspataloha jeans denim misy tsipika miaraka amin'ny hodi-kazo bibilava avy amin'ny fanangonana 1975pataloha lehilahypataloha ho an'ny lehilahy misy pirintypataloha camopataloha camo vehivavypataloha skipataloha ski vehivavypataloha ski ho an'ny ankizy tutuplpataloha ski ho an'ny ankizypataloha ski ho an'ny lehilahyPataloha Nikedungareesmiasa dungarees amin'ny pirintypataloha miasa miaraka amina pirintymiasa pataloha miaraka amin'ny pirintinao manokanapataloha snowboardpataloha mandeha an-tongotrapataloha mandeha an-tongotra vehivavypataloha plaidpataloha misy «checkered» ho an'ny lehilahypataloha waxedpataloha wranglerpataloha misy loakapataloha misy rojo vypataloha misy pirintypataloha misy pirinty ho an'ny vehivavypataloha misy pirinty voninkazopataloha misy pirinty ho an'ny lehilahypataloha misy pirinty eo ambanypataloha misy pirinty voninkazoPataloha pirinty voninkazo Zarapataloha miaraka amin'ny pirintinao manokanapataloha avopataloha stradivariuspataloha tchibo, lava 7/8 misy pirintypataloha wranglerpataloha zara